अाजकाे दिन हिजाेकाे भन्दा फरक पाएँ । | Ekhabar Nepal
अाजकाे दिन हिजाेकाे भन्दा फरक पाएँ ।
समाज चैत्र २६ २०७६ ekhabarnepal
किन पनि फरक छ भने अाज लकडाउनकाे चाैधाैं दिन हाे । राती बिहान पनि फरक महसुस गरेकाे थिएँ । सुत्दा पङ्खा चलाएँ, चिसाे हाेलाकि भनेर निभाएँ । एउटा पातलाे रग त छ अाेछ्यानमा, अाेढ्न भने परेन । बिहानैबाट घाम टकटकी लागेकाे छ । क्यारूँ क्यारूँ भयाे । मन पढ्न तिर घुमाएँ । के पढ्ने समस्या तेर्सियाे पहिले पहिले के तरकारी खाने हाेला भने जस्तै ! अब किताबका अघि पुगेर बसें । पतस्याइदेखि झक्कले किताब हेर्दै पन्छाउने क्रम सुरू भयाे । अाँखा डुलिरह्याे । कुनैमा टिक्दैन, एक मनले पुराना फाेटा एल्बमहरू झिकेर हेराै कि मनमा कुरा खेले । त्याे त फेरि फेरिलाई चाहिन्छ भन्ने लाग्याे र सबै किताब एक एक हेर्दै पन्छाउदै गएँ ।
एउटा किताबमा अाँखा अडियाे । नेपालकाे नक्सा माथि जाहाज उडेकाे नक्सामुनी स्वतन्त्रताकी देवी समेत अमेरिकाका गगनचुमबी टावर जस्ता भवन । झिकेर पन्ना पल्टाएँ । यात्रानुभूति रहेछ । अाजकाे अमेरिका विश्व समाचारमा छाएकाे अमेरिका, काेराेनाले ग्रस्त तर अटेरी अमेरिका मन भरी अायाे । सर्वस्व छाडेर हाम्रा राम्रा राम्रा जान्ने मान्नेहरूकाे स्वप्नलाेक अमेरिका बारेका पङ्ति र पन्नाहरूमा सुस्तरी भित्र छिरें । २५असार २०६८ देखि ३०साउन सम्म पढ्दा ३६ पेज सकिएछ । निकै पढेकाे ठानें र उठेर बाहिर तिर हेरेें । कता कति अावस्यक सामान किन्ने खाने बाटामा हिडेकाे हेरेर अाफै हिडेकाे महसुस गरेर चित्त बुझाएँ । कुन्नी किन हाे अटेरै गरेर फुत्त निस्कन मनलै मानेन अाज सम्मै। बिहान बेलुका २०/३० जना बाटामा लखर लखर हिडेकाे देख्दा पनि रहर नलाग्ने अनाैठाे मान्छे भइयाे कि जस्ताे लाग्छ अाफैलाई ! सबैले लत्त छाडे सिंगाे मानव जातिकाे माेर्चा कमजाेर हुने विचारले घरमै अझ भित्रै बस्न र लकडाउन परीपालना गर्न भनेकाे भन्यै छ । मेराे घरबाटै ठूलाे मैदान वरिपरि हरिया पाहाडकाे दृष्यमा ससाना परिवर्तन खाेजें । बनका केही पाटाहरूमा पतझड देखियाे । गएका वर्षमा झैं असमाजिक घातकीहरूले बनमा अागाे नलगाए हुन्थ्याे भन्ने साेंचें । चैतकाे चर्काे घाम अागलागीकाे पिराे धुँवा सम्झँदै चसक्क बिझायाे ।
एक पटक छतमा पुगेर मात्रै पढ्न पर्ला । छतबाट हेरें देखिने सबै तिर । हाटबजार नेरकाे पिपल पलाएकाेले खुसी लाग्याे । वातावरणमा तुवालाे मन नपर्दाे दृष्यबाट अाँखा फर्काएँ उम्रेका झालपातका बिरुवा तिर । अाज अमेरिका भारत र नेपालकाे काेराना हेरे । अमेरिकामा ज्यान जाने ११ हजार पुग्न थाले, त्यहा ४ लाख संक्रमितकाे संख्या पुग्न गएछ । हामीलाई पनि तीन तिरबाट सीमानाले घेरा हालेकाे तस्वीर फनक्क दिमागमा घुम्याे । केही दिन पहिले कन्टाजियन भन्ने काेराेना फिल्म हेरेका थियाैं परीवार सबै बसेर । करीब नाै वर्ष पहिले अमेरिकामा निर्माण गरिएकाे । महामारीकाे रूपमा सर्ने अमेरिकाले उहिलै काेरनाकाे काल्पनिक अनुमान गरेकाे रहेछ । एक गिलास ताताे पानी खाएँ । पिएँ भन्न अाएन मलाई । सुरूमा अानन्द लाग्थ्याे ताताे पानी । अब अाैषधी जस्ताे लाग्दै छ । गर्मी चढ्दै गएर हाे वा चिसाे खान हुन्न भन्ने परेर हाे । मिसमास गर्न थालियाे अब । पटक पटक नदाेरिए हुने हाे ।
म फर्कें काेठामा बिस्तरामा पल्टेर निदाउ कि जस्ताे भयाे । पङ्खा चलाएँ । समाचार धेरै सुन्न छाडेकाे अलिक दिनै भयाे । अघिकाे किताब लिएर हेरें । यीनकाे लेखन शैली राम्रै हाे ! अाफै साेचें । चिनल राखेकाे पाताे पल्टाएर पढ्न थालें । अमेरिका गएकाे भन्नलाई न्युयर्क र वाशिङटन डिसी पुग्नु पर्ने हतारकाे यात्रा सकेर ती मियाँ बिबीकाे यात्रा बिसाएकाे थिएँ अघि । पाेहर हामी बुढाबुढीले छ दिनमा फ्रान्स र इटालिकाे यात्रा गरेकाे झलक्क याद अायाे ।
अाज दाेश्राे पटक पढाइकाे थालनी यसका लेखक २००४ भदाैकाे जन्मदिनबाट सुरू गरें २०६८ काे भदाै ४ गते । याे उनकाे पहिलाे जन्मदिन र सानाे तीज पनि थियाे । लेखकले पाठकलाई अाफू सँगै घुमाउने तागत राख्ने हुनाले पनि मैले एक पछि अर्काे शीर्षक पढीरहें । उनले अमेरिकैबाट पत्रिकामा छपाएकाे एक दुइटा पढेका परेछन । ती पनि पढें । अमेरिकामा १ प्रतिशतले १ प्रतिशतद्वारा १ प्रतिशतका लागि शासन गर्ने व्यवस्था रहेकाे अर्थशास्त्रिकाे चर्चा गरेर परिचय दिएकाछन । १७ मंसिर २०६८ सम्मका घतलाग्ला लेखहरूकाे ९४ पेजकाे पुस्तिका पढिसक्दा, अमेरिका बारे निचाेढ पछि यात्रा अवधि नथप्ने टुङ्गाेका साथ लेखनीलाई बिसाउछन । पछाडिकाे पातामा लेखककाे ढाका टाेपी र काेटमा हाँस्ने सम्भावना रहेकाे सुपरीचित तस्वीर हेरेर पाठकहरूले पढ्न बाँकी भए पढ्नु हाेला म गएँ अब छतमा बसेर बाहिरी दृश्यावलाेकन गर्न ।